Telecommunications Movilnet CA သည် Movilnet ဟု လူသိများသည်။ ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ၏ မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကဏ္ဍတွင် ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. မြန်မာနိုင်ငံတွင် မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းလိုင်းများ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရှိသည်။ Movilnet အားပြန်သွင်းခြင်းသည် အလွန်လွယ်ကူသည်၊ ၎င်းကိုပြုလုပ်နည်းကို ကျွန်ုပ်တို့ပြသထားသည်။
ထူးခြားသော အီလက်ထရွန်းနစ်အတုကတ်ဖြင့် Movilnet အား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပါ။
ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီ Movilnet သည် အထူးသဖြင့် ကြိုတင်ငွေပေးစနစ်နှင့် ငွေဖြည့်သွင်းသူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်ပြီး တစ်ခုတည်းသော အီလက်ထရွန်းနစ် virtual ကတ်ကို ရောင်းချရန်အတွက် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ ၎င်း၏စီးပွားရေးရုံးများကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဒါက သင့်ဘဏ်မှ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းပိုက်ဆံအိတ်မှတဆင့် သင်ဒက်ဘစ်ကတ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ နိုင်ငံသားကတ်၏ ငွေပေးချေသည့်အခါတွင်၊ ၎င်းတို့သည် သင့်အား *16 ကိုခေါ်ဆို၍ သင့်မိုဘိုင်းစက်တွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်သည့် ဂဏန်း ၁၆ လုံးကုဒ်ကို SMS သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ဖြင့် ပေးပို့မည်ဖြစ်သည်။
ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုဝင်ပါ။ www.movilnet.com.veMovilnet ၏ စီးပွားရေးရုံးများ၏ နာရီများနှင့် လိပ်စာများအပြင် ဤဝန်ဆောင်မှုကို ရရှိနိုင်သည့် အခွင့်အာဏာရ Cantv အေးဂျင့်များကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
Un1ca ကတ်ဖြင့် Movilnet အား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပါ။
2018 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် Movilnet သည် Un1ca Card ကို ရောင်းချရန်အတွက် ထုတ်ပေးမှုကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း မကြာသေးမီက ကုမ္ပဏီမှ ပြန်လည်အားသွင်းမှုပုံစံကို ပြန်လည်ကြေငြာခဲ့သည်။. ထို့ကြောင့် ၎င်း၏အသုံးပြုမှုပုံစံကို ရှင်းပြရန် အထိုက်အလျောက်ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။
Un1ca Card သည် Movilnet အား ပြန်လည်အားသွင်းနိုင်ရုံသာမက သင်၏ CANTV ကြိုးဖုန်း၊ အများသုံးတယ်လီဖုန်း သို့မဟုတ် Cantv ဂြိုလ်တုရုပ်မြင်သံကြားဝန်ဆောင်မှုအတွက် ငှားရမ်းခကိုလည်း ပေးချေရန် ၎င်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူ သင်သည် ပြည်တွင်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ နိုင်ငံတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ခရီးဝေးနှင့် မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကတ်၏နောက်ဘက်တွင် ၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက် သင်ဂရုတစိုက်ဖော်ပြရမည့် လျှို့ဝှက်ကုဒ်နှင့် ဘားကုဒ်တစ်ခုကို ပြသထားသည်။
ကတ်နောက်ဘက်ရှိ လျှို့ဝှက်ကုဒ် (PIN) ကို ဂရုတစိုက်ထုတ်ဖော်ခြင်းဖြင့်၊ သင်သည် Movilnet အား အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့် ပြန်လည်အားပြန်သွင်းနိုင်သည်-
သင့်မိုဘိုင်းမှ *21 + လျှို့ဝှက်ကုဒ် + ခေါ်ဆိုမှုသော့ကို ခေါ်ဆိုပါ။
ကတ်ကို ဝဘ်ဆိုက်မှ အသက်သွင်းပါ။ mobilenet.com အပိုင်း "Un1ca ဖြင့် အားပြန်သွင်းပြီး ပေးချေပါ။"။
* စာသား (* 83986) + လျှို့ဝှက်ကုဒ် + ခေါ်ဆိုမှုသော့ကို ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့် Movilnet စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများကိုလည်း ပြန်လည်အားဖြည့်နိုင်ပါသည်။
Un1ca Movilnet ကတ်ကို ဝယ်ယူပြီး တရားဝင် Movilnet စာမျက်နှာသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် ၎င်းကို အသက်ဝင်စေမည့် ရိုးရာနည်းလမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့မြင်ပြီးဖြစ်သည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် Movilnet အား ပြန်လည်အားပြန်သွင်းရန်အတွက် အင်တာနက်အသုံးပြုနည်းများကို မြင်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။
Banco de Venezuela မှ Movilnet အား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပါ။
Banco de Venezuela မှ Movilnet အား ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်၊ သင်သည် BDV အွန်လိုင်းတွင် စာရင်းသွင်းအသုံးပြုသူဖြစ်ရပါမည်။
1.- သင်၏ဒက်ဘစ် သို့မဟုတ် ခရက်ဒစ်ကတ်နံပါတ်နှင့် သင့်စကားဝှက်ကို ရိုက်ထည့်ခြင်းဖြင့် သင်သည် ထည့်သွင်းပါ။
2.- အတွင်းထဲသို့ရောက်သည်နှင့်၊ စာမျက်နှာ၏ဘယ်ဘက်ကော်လံတွင်ရှိသော "ငွေပေးချေမှုများ" ကဏ္ဍကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းကိုနှိပ်ပြီး "ဝန်ဆောင်မှုပေးချေမှု" ကိုရွေးချယ်ပါ။
3.- "ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစား" နှင့် "ပေးချေရမည့်ဝန်ဆောင်မှု" ကိုရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး စာမျက်နှာအသစ်တစ်ခုဖွင့်ပါမည်။ ယခင်က စာရင်းသွင်းထားသော မကြာခဏ ငွေပေးချေမှု သို့မဟုတ် ယခင်က စာရင်းသွင်းထားခြင်းမရှိသော မိုဘိုင်းဖုန်းအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းတော့မည်ကို ညွှန်ပြရမည့် စာမျက်နှာတစ်ခု ထပ်မံဖွင့်ပါမည်။
4.- ထို့နောက်၊ drop-down list တွင်ပေါ်လာသည့်ရွေးချယ်မှုများအရ အားပြန်သွင်းရန် ပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ။
5.- စနစ်သည် သင်၏ သြဒီနိတ်ကတ်တွင် ကုဒ်နှစ်ခုကို အတည်ပြုရန် သို့မဟုတ် အွန်လိုင်း BDV မှ သင့်မိုဘိုင်းသို့ SMS မှတစ်ဆင့် အလိုအလျောက် ပေးပို့မည့် ကုဒ်ကို ရိုက်ထည့်ခိုင်းမည်ဖြစ်သည်။
6၊ - ကုဒ်အတည်ပြုပြီးသည်နှင့် ဖော်ပြထားသည့် ဖုန်းနံပါတ်တွင် လက်ကျန်ငွေကို ချက်ချင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Banco Banesco မှ Movilnet အား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပါ။
Banco Banesco မှတဆင့် သင်၏ Movilnet လက်ကျန်ငွေကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းရန်၊ သင်သည် Banesco အွန်လိုင်းတွင် စာရင်းသွင်းအသုံးပြုသူဖြစ်ရပါမည်။
1.- ဝင်ပါ။ banesco.com ပြီးတော့ Banesco Online မှာ။ သင့်အသုံးပြုသူအမည်ကိုရေးပြီး လက်ခံမည်ကို နှိပ်ပါ။ သင့်စကားဝှက်ကိုရေးပြီး လက်ခံမည်ကို နှိပ်ပါ။
2.- စာမျက်နှာ၏ဘယ်ဘက်အတန်းရှိ "ငွေပေးချေမှုများ၏ လမ်းညွှန်ချက်/ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းမှုများ" ရွေးချယ်စရာကို နှိပ်ပါ။ "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ" ကို ရွေးပါ။
3.- စာမျက်နှာ၏အောက်ခြေသို့သွား၍ "include" ကိုနှိပ်ပါ။
4.- ပြီးနောက် option ကို အမျိုးအစား "Movilnet" ကိုနှိပ်ပါ။ လုပ်ဆောင်ချက်ကို သင်သိရှိနိုင်စေမည့် Alias ​​၊ အကျိုးခံစားခွင့်၏ အမည်နှင့် တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တို့ကို ရေးသားပါ။
5.- ထို့နောက် စနစ်သည် သင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အရာပေါ် မူတည်၍ အထူးလုပ်ဆောင်မှုစကားဝှက်ကို သင့်မိုဘိုင်းဖုန်း သို့မဟုတ် အီးမေးလ်သို့ ပေးပို့သည်။ ၎င်းအတွက် သတ်မှတ်ထားသော နေရာကို ဤကုဒ်ကို ရေးပါ။ သင်အလိုရှိတိုင်း အားပြန်သွင်းရန် Movilnet နံပါတ်ကို ထည့်ရန် ဤလုပ်ငန်းစဉ် လိုအပ်ပါသည်။
6.- ယခု Movilnet အား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းလိုပါက စာမျက်နှာ၏ဘယ်ဘက်အတန်းတွင်ရှိသော "အခြားငွေပေးချေမှုများ/အခွန်များ" ရွေးချယ်စရာကို ရွေးချယ်ရန်၊ "Directory" ကိုနှိပ်ပြီး အားပြန်သွင်းရန် မိုဘိုင်းကို ရွေးချယ်ပါ။
7.- ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းသည့်ပမာဏကို ငွေထုတ်ယူရန် အကောင့်နံပါတ်ကို ရွေးချယ်ပါ။ အားပြန်သွင်းရန် ပမာဏကိုရေးပြီး လုပ်ဆောင်ချက်ကို အတည်ပြုပါ။ သင့်လက်ကျန်ငွေကို ချက်ချင်းရရှိပါမည်။
Movilnet ကို အခြားဘဏ်များနှင့် ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပါ။
Banco de Venezuela နှင့် Banco Banesco တို့တွင် Movilnet အား မည်သို့အားပြန်သွင်းရမည်ကို အသေးစိတ်ရှင်းပြထားပြီး၊ ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အဓိကဘဏ်များဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ Banco del Tesoro၊ Banco Venezolano de Crédito၊ 100% ဘဏ်၊ Banco Exterior၊ Banco Fondo Común၊ Banco Bicentenario နှင့် Bancaribe တို့တွင် အလားတူနည်းဖြင့် သင်အားပြန်သွင်းနိုင်ပါသည်။
ဖုန်းငွေဖြည့်ပါ » နိုင်ငံခြား » မိုဘိုင်း Movilnet ငွေဖြည့်ပါ။
"Recharge Mobile Movilnet" တွင် မှတ်ချက် 25 ခု
28:2020 pm မှာမေလ 1, 21
ကောင်းသောညပါ ကျွန်ုပ်၏မိုဘိုင်းလ်လိုင်းကို အားပြန်သွင်းရန် ကြိုးစားနေပြီး သီးသန့်ကုဒ်တစ်ခုမဝယ်နိုင်ပါ နှင့် MOLVINET စာမျက်နှာကိုလည်း မထိခိုက်စေပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 0467460523
27:2020 pm မှာအောက်တိုဘာလ 9, 14
၎င်းတို့သည် ပလပ်ဖောင်းကို ပြုပြင်ပြီးဖြစ်ကာ မိုဘိုင်းလ်ဘဏ်စနစ်မှ ပြန်လည်အားပြန်သွင်းမှုများကို လက်ခံရရှိလျက်ရှိသည်။
6:2020 pm မှာဇွန်လ 1, 13
ကျွန်ုပ်၏ Movilnet လိုင်းသည် လက်ကျန်ကို မယူလိုပါ။
27:2020 pm မှာအောက်တိုဘာလ 9, 15
ပြဿနာက ပြတ်တောက်ပြီး တစ်နေ့မှာ အားပြန်သွင်းနိုင်ပြီး နောက်တစ်ခုက အဆင်မပြေပါဘူး။ ၎င်းတို့သည် ပလပ်ဖောင်းကို ပြုပြင်ပြီးဖြစ်ကာ မိုဘိုင်းလ်ဘဏ်စနစ်မှ ပြန်လည်အားပြန်သွင်းမှုများကို လက်ခံရရှိလျက်ရှိသည်။
6:2020 pm မှာဇွန်လ 3, 32
ကောင်းသောညပါ။ ငါ့လိုင်းကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ အားပြန်မသွင်းနိုင်ဘူး။ ငါဒီလိုဖြစ်နေတာ နှစ်လရှိပြီ။ ဖုန်းနံပါတ်က 04160900658 ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းရဲ့အကူအညီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
10:2020 pm မှာဇွန်လ 1, 45
ကျွန်တော့်ဖုန်းက အားပြန်မသွင်းတော့တာ တစ်လကျော်ရှိပါပြီ။
10:2020 pm မှာဇွန်လ 1, 25
Bqto 04161505811 တွင် ငွေဖြည့်ပေးသော အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ကျွန်ုပ်သိပါသည်။
5:2020 pm မှာသြဂုတ်လ 9, 15
မိုဘိုင်းကွန်ရက်ကို အားပြန်သွင်းနည်း သိလိုပါတယ် pleaserrrr
27:2020 pm မှာအောက်တိုဘာလ 9, 12
ယခုအချိန်တွင် သင်သည် ဗင်နီဇွဲလားဘဏ်နှင့် နှစ်တစ်ရာပြည့်ဘဏ်တို့မှ Movilnet အားပြန်သွင်းခြင်းကိုသာ လက်ခံရရှိသည်
23:2020 pm မှာဇွန်လ 12, 00
ကောင်းသောညပါ ကုမ္မဏီ movilnet မှ လူကြီးမင်းများ ၊ ကျွန်ုပ်၏ ဖုန်းများကို အားပြန်သွင်းရန် ၃ လ ကြာမြင့်ပြီ ဖြစ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ နံပါတ်သည် 3belkys ဖြင့် အားပြန်သွင်းရန် မည်သို့မျှ မဖြစ်နိုင်ပါ ။
8:2020 pm မှာဇူလိုင်လ 9, 39
မင်္ဂလာပါ ကောင်းသောနေ့လည်ခင်းပါ ကောင်းချီးများ ၊ ကျွန်ုပ်သည် ဗင်နီဇွဲလားဘဏ်မှ ငွေပြန်သွင်းပြီး ပျောက်သွားသောကြောင့် ဆဲလ်ဖုန်းတွင် လက်ကျန်ငွေမရှိသည်မှာ နှစ်လရှိပြီ၊ အားပြန်သွင်းနည်း အချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည် 04261433296 ကျေးဇူးပါ XNUMX
16:2020 pm မှာဇူလိုင်လ 10, 58
ကပ်ရောဂါစတင်ကတည်းက၊ ကျွန်ုပ်သည် ငွေပေးချေရန်၊ လက်ကျန်တစ်ခုတောင်းဆိုရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်၏ postpaid celuar movilnet အကောင့်ကို ငွေတောင်းခံခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
အကြွေးဝယ်ကတ်သည် ဘီလ်ပေးချေခြင်းမပြုတော့ဘဲ၊ Banco de Venezuela၊ BBVA၊ Banco del Tesoro တို့မှတစ်ဆင့် ၎င်းကို ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ အင်တာနက်ကတစ်ဆင့် ပြေစာတောင်းတဲ့အခါမှာလည်း မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊ cantv အီးမေးလ်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ အခုက မဖွင့်ဖြစ်တော့ဘူး၊
ကျေးဇူးပြု၍ အသေးစိတ်အကောင့်နှင့် ငွေပေးချေနည်းလမ်းကို ဖော်ပြပါ။
27:2020 pm မှာအောက်တိုဘာလ 9, 13
17:2020 pm မှာဇူလိုင်လ 10, 52
အားလုံးက စိတ်အားထက်သန်မှုမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ အလုပ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဗင်နီဇွဲလား ယာယီသမ္မတရဲ့ အစိုးရဟာ မဲပေးသူအများစု ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ အခြားရာထူးကို ပြုပြင်ဖို့ တာဝန်ယူမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
26:2020 pm မှာဇူလိုင်လ 12, 09
ဟယ်လို၊ အားပြန်သွင်းဖို့ လိုပါတယ်၊ ကုဒ်တွေရှိလို့ မတတ်နိုင်သေးပါဘူး။ ကျေးဇူးပြုပြီး ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဘုရားသခင်သင့်ကိုကောင်းချီးပေးပါစေ။
ဂျိုဟန်မန်နူရယ် မန်ဒိုဇာ တောရက်စ်
26:2020 pm မှာဇူလိုင်လ 2, 51
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏လက်ကျန်ငွေအား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းရန် နှစ်ရက်ကြာပြီး 04167544499 ကျွန်ုပ်သည် Rio Claro Edo Lara Parish Juarez မှ မရနိုင်ပါ။
9:2020 pm မှာသြဂုတ်လ 12, 46
ကောင်းသောညပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် ဗင်နီဇွဲလားဘဏ်မှတစ်ဆင့် ငွေပြန်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းနေသည်မှာ ၁၅ ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး အခြားဘဏ်များမှ ၎င်းကို မဆောင်ရွက်နိုင်သေးဘဲ စောင့်ဆိုင်းနေဆဲ သို့မဟုတ် ငွေဆုံးရှုံးသွားပါသလား။ ငါ့နံပါတ်က 15 ပါ။
27:2020 pm မှာအောက်တိုဘာလ 9, 11
Movilnet သည် လူမှုကွန်ရက် WhatsApp မှတစ်ဆင့် အရေးဆိုမှုများပြုလုပ်ရန် နံပါတ် 04166316892 ကို ဖွင့်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည် အားပြန်သွင်းပြီး သင့်မိုဘိုင်းတွင် လက်ကျန်ငွေကို မရရှိပါက၊ ၎င်းတို့ကို WhatsApp ဖြင့် ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံ ပေးပို့နိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို သင့်မိုဘိုင်းလက်ကျန်ငွေစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းရန် သဘောတူသည်။
1:2020 pm မှာစက်တင်ဘာလ 6, 12
mobilenet သည် အားပြန်သွင်းရန် စက်ဆုပ်ဖွယ်ဖြစ်သည်။
22:2020 pm မှာအောက်တိုဘာလ 4, 35
Movilnet သည် လက်ကျန်ဖွဲ့စည်းပုံစနစ် တက်ကြွမှုမရှိခြင်းနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ၎င်း၏ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ဆဲလ်ဖုန်းလိုင်းအား ပြန်လည်အားသွင်းခြင်းအတွက် 40% ဓားပြတိုက်မှုအား ပေးဆောင်စေခြင်းဖြင့် ငွေဆုံးရှုံးသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည် ဆက်သွယ်ရေးပြဿနာများ တစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘဲ ယခုအခါ သင့်ဝန်ဆောင်မှု၏ ထိရောက်မှုအပေါ် အားမကိုးဘဲ ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤအခြေအနေများတွင် ဆက်လက်ရှိနေပါက၊ သင့်ဖောက်သည်များသည် ၎င်းတို့အား ပိုမိုထိရောက်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် အခြားအော်ပရေတာများသို့ သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုပို x 10 ၏ 40% ပေးဆောင်သော ဖောက်သည် 300.000 သန်းကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။
27:2020 pm မှာအောက်တိုဘာလ 9, 06
သေချာတာကတော့ Movilnet က အများကြီး ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းသည် ပထမဆုံး မိုဘိုင်းလ် ဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီ ဖြစ်လာခြင်းမှ နောက်ဆုံး အဆင့်သို့ ရောက်သွားခဲ့သည်။ Movilnet အား အားပြန်သွင်းရန် ပြဿနာများသည် ပို၍ပို၍ ပြင်းထန်လာပြီး browsing speed သည် မကောင်းပါ။ သို့သော်လည်း ၎င်း၏နှုန်းထားများသည် စျေးကွက်တွင် အသက်သာဆုံးဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေနည်းသူများအတွက် ဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်နေသေးသည်။